တရုတ်အဝတ်အထည်လုံခြုံရေး AM 58KHz အမှတ်တံဆိပ်အာရုံခံကိရိယာအာရုံစူးစိုက်ရန်ခဲယဉ်းသည့်တံဆိပ် - ခဲတံခဲတံတံထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများ | .တ္ထရော
AM Acute Pencil hard tag အဝတ်အထည်လုံခြုံရေးအချက်ပေးအာရုံခံကိရိယာ
AB အသစ် ABS တံဆိပ်ပစ္စည်း - အနက်ရောင်အစက်အပြောက်များမပါဘဲလှပသောအရောင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကင်းသော
1.5 ၁.၅ မှ ၁.၈ မီတာအကွာအဝေးတွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး AM EAS အင်တင်နာဂိတ်များသည် EAS AM စနစ်အားလုံးအားအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အထောက်အကူပြုသည်။
၀.၅-၂.၈ မီတာ (လုပ်ငန်းခွင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ်မူတည်သည်)
1. အထည်အလိပ်အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်စူပါမားကက်များတွင်အဝတ်အစားများသာမကဖိနပ်၊ ပဝါ၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊
2. ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ဘယ်တော့မှယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိစေရန်၊ စျေးနှုန်းသင့်တင့်သောအရည်အသွေးရှိခြင်း။
3.Super Detection အကြီးစားခဲတံကြီး AM 58Khz Hard Shop သည်အဝတ်အစားဆန့်ကျင်ပစ္စည်းအရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်ပိုမိုထိရောက်သောအသံနှင့်သံလိုက်တံဆိပ်များ၊ ရှည်လျားသောအာရုံခံအကွာအဝေး၊ ကျယ်ပြန့်သောဆိုင်များရှိစျေးဆိုင်များအတွက်သင့်လျော်သည်။
♦ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ AM ခဲတံကြီးကိုလက်လီအရောင်းဆိုင်အမျိုးမျိုးတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ EAS ခဲတံအကြီးသည်သံမဏိပင်သို့မဟုတ်ကြိုးကြိုးနှင့်အတူ တွဲ၍ သိုလှောင်မှုကိုတားဆီးရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောလက်လီကုန်ပစ္စည်းများတွင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ အဝတ်အထည်စတိုး EAS စနစ်ဆန့်ကျင်။ ခိုးယူနိုင်သောသံလိုက်လုံခြုံရေးတံဆိပ် Lanyard နှင့်အတူခဲယဉ်းသည့် - ခဲတံတံဆိပ် Tag
နောက်တစ်ခု: EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label စူပါမားကတ် -4040 တံဆိပ်
Clothing Security AM 58KHz အမှတ်တံဆိပ် Alarm Sensors-M ...